Culture | SASCA Manchester
Maamuuska u Maamuuska u Maamuuska u
June 9, 2015 dave porter Somali language version stories	Africa, community, Culture, News, sasca, Somali
H ana Mohamed oo ka mid ah somalida magaalada Manchester ku dhaqan ayaa muddo kooban loogu aqoonsaday in ay ka mid tahay haldoorka u adeegayaasha bulshada.
xaflad balaadhan oo dhawaan lagu qabtay hoolka shirarka ee Philip Martin, ayaa Hana iyo labbo qof oo kale lagu gudoonsiiyey shaadad-sharaf loogu maamuusayo sida tabaruca iyo hagar la’aanta ah ee ay ugu adeegaan uguna taageeraan bulshadooda.
Hana oo sanadkii 2012 u soo guurtay magaalada Manchester ka dib markii ay nolasheeda intii hore ay ku soo qaadatay dalka Imaaraadka carab, ayaa shahaadadan loogu aqoonsaday sida firfircoon ee ay umadeeda ugu caawiso xarunta ururka Sasca oo ay ka howlgasho.
“Shahaado-sharaftan la igu maamuusay waxa ay idareensiisay sida bulshadaydu ugu hanweyn tahay taageerdayda iiguna bogaadinayso.” ayey tidhi; hana oo ka waramaysay sida ay u aragto shahaadada la gudoonsiiyey. Waxaanay iyadoo faahfaahin ka bixinaysa sida ay dadka ugu caawiyaan xarunta ururka Sasca ay intaa raacisay “Marka aan sidan u dhagaysto baahidooda ayaan ka caawiyaa bulshadayda ilaa iyo inta aan awoodo, tani mararka qaarkood ma fududa laakiin kalsoonida ay ugu qabaan awgeed ayaa keenta inaan isku taxaluujiyo wax la qabashadooda.”
Hana oo culuunta isgaadhsiinta iyo teknoolijiga ku soo dhigatay jaamacada Hargeysa, ayaa sheegay in markii ay timid wadanka UK ay bartay sida uu u shaqeeyo nidaamka dalkani. “ Markii u horaysay ee aan UK imid aad bay u adkeed meelo badana ma dareemin soo dhawayn.
Balse meeshii u horaysay ee aan soo dhaweyn dareemaa waa xaruntan, sababta ma garanayo” ayey tidhi Hana.
Waxaanay sheegaytay in qorshaheeda mustaq balku uu yahay in ay la sii joogto urarka Sasca, isla markaana sii wado wax ka qabashada baahiyaha bulshada .